Izinhlobo ze-carrot | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izinhlobo ze-carrot
Sakha i-topiary ngezandla zethu
Phakathi nakho konke, isintu selokhu sibhekene nobuhle: ubufakazi bezinto eziphathekayo nezomoya yibufakazi obungenakuphikwa ngalokho. Abantu bahlobisa impilo yabo ngemidwebo, imidwebo, i-stucco, i-embroidery nezinye izindlela eziningi ezitholakalayo ezinenjongo yemilingo. Umkhuba wokuhlobisa izihlahla, kubandakanya ukuzinikeza isakhiwo esithile, ukuhanjiswa kwamagatsha ngendlela ekhethekile, kwavela njengomkhuba wokukhulekela.
Izaqathe "Shantane 2461": incazelo nokulima
Izaqathe "Shantane 2461" sekuyisikhathi eside iphakathi kwezinhlobo ezinhle zokulima. Ukuba nezimfanelo zomholi, lezi zinhlobonhlobo ziye zafaka zonke izici zomkhiqizo obonakalayo: ukunambitheka okumnandi nephunga elimnandi, ukubukeka okuhle, isivuno esikhulu, ukusetshenziselwa okuningi okusetshenziselwa ukusetshenziswa. Kulesi sihloko sizobheka izinto ezikhethekile zokunakekelwa, incazelo yezinhlobonhlobo, izinzuzo nezingozi zomvakashi waseFrance.
Izinqathe "Samson": incazelo, ukutshala nokunakekelwa
Phakathi kwezinhlobonhlobo zeqathethi ezithandwa emakethe yasekhaya, uSamsoni akade ekugcineni. Wakha ukunakwa kwabalimi ngenxa yokunambitheka kwawo okuhle nokugcina izinga elihle kakhulu lokugcina. Masibuye sihlolisise incazelo kanye nezici zempande.
I-Carrot "Nantes": incazelo, ukutshala nokunakekelwa
I-Carrot "Nantes" - inzalamizi ecishe ibe neminyaka engu-80 ubudala, eye yazibonakalisa ezikhaleni zeSoviet Union yangaphambili. Lezi zinhlobonhlobo zatholakala ngabalimi baseSoviet eminyakeni engama-40 ekhulwini lokugcina. Le isanqante yatshalwa eningizimu yeKrasnodar nasemibhedeni yesifunda sase-Irkutsk - futhi yonke indawo yayiyithokozisa abalimi abanomkhiqizo ohlala njalo.
Izakhiwo eziwusizo zezinqathe ezibomvu
Ama-karoti wombala ongavamile we-violet okwamanje athola ukuthandwa. Ake sizame ukuthola ukuthi yini, ngaphandle kombala wempande, ihluke ezinhlobonhlobo zama-karoti, ezinezakhiwo eziwusizo futhi okungenakwenzeka. Incazelo Kusukela ekubukeni kwe-botany, izaqathe ezibomvu ziyingxenye efanayo ye-subspecies njenge-isanqante evamile (i-Daucus carota subsp.
High-isivuno isanqante ezihlukahlukene Vita Long
Ngamunye wenza izidingo zawo siqu ngekhwalithi kanye nezici zemifino: ukunambitheka kubalulekile kumuntu, ukugcina ikhwalithi kubalulekile kumuntu, ukuma nombala ocebile kumuntu. Konke lokhu - indlela ongayisebenzisa ngayo ngokukhetha ibanga. Zonke izinhlobonhlobo zezinqathe zisezinhlobonhlobo eziyisishiyagalombili eziyinhloko: "Amsterdam", "Nantes", "Flaccus", "Shantenay", "Berlikum", "I-mini-izaqathe", "isanqante saseParis" nezinhlobo zesikhashana zeqathe.
Indlovukazi yasekwindla: izici ze-carrot izinhlobo
Namuhla sizokutshengisa ezinhlobonhlobo ezinhle ze-izaqathe esedlule ebizwa ngokuthi "iNdlovukazi yase-Autumn". Kunezinhlobonhlobo eziningi ezinemiqondo eminingi emihle, kodwa "iNdlovukazi yase-Autumn" ibhekwa njengenye yezindlela ezingcono kakhulu zokukhula kwesimo sezulu esifudumele nesezingeni eliphansi. Uzofunda ukuhlwanyela kahle ukuthi udinga izaqathe ukukhula okuhle nokuthuthukiswa, futhi uthole isici esiphelele sezinhlobonhlobo.
Umbhali wezinqathe ezihlukahlukene Tushon
I-izaqathe iyimifino ethandekayo, ethandwa, futhi enempilo. Namuhla kunezinhlobonhlobo eziningi ezinezici ezahlukene. Kulesi sihloko sizokhuluma ngezindlela ezihlukahlukene zeTrothon, sizokwenza incazelo, amathiphu okuhlwanyela nokukhathalela, isithombe salokho okuzokhula uma zonke izincomo zilandelwa. Incazelo nesithombe "Tushon" iyinhlobo ehlukahlukene yokuvuthwa kwamaqathe.
Izithelo eziningi: Canada F1 izaqathe ezihlukahlukene
Amaqathi "I-Canada F1" isivele itholakale ezindaweni eziningi zabantu, ngoba, njengoba kuchazwe, ukuhlukahluka kuhlanganisa ukunambitheka okuhle kakhulu ekuvuneni futhi kulungele isimo sezulu nesimo somhlabathi wendawo ephakathi. Futhi ngisho nabalimi abanokuhlangenwe nakho okukhulu bayothola lesi sananisi ukuhlanganisa okuhle kwezinye izitshalo ezisegadini zabo.
Thola abalimi - Iklabishi yePeking Bilko
Izitshalo eziluhlaza zobusika eziyi-9 zokuhlobisa ingadi yakho ebusika
Ungawavikela kanjani amaphutha lapho uqoqa ukhukhamba?
Incazelo nokulimala kwe-Pablo beet
I-Panicle ne-hydrangea yesihlahla - umehluko
Ezihlukahlukene zamagilebhisi anamnandi neziphunga "Umxhasi"
Indlela yokudla ugarlic kanye anyanisi nge-ammonia
Izinhlobonhlobo zasebusika-eziqinile kanye nokuphila kwelanga elide - eliphakathi kwe "Decakrinka"